Somaliland: Hay’adda Shaqaalaha oo Bilawday Barnaamij Lagaga Faa’iidaysanaay Xirfada iyo Waayo-aragnimada Qurba-jooga | Maankaab.com
Somaliland: Hay’adda Shaqaalaha oo Bilawday Barnaamij Lagaga Faa’iidaysanaay Xirfada iyo Waayo-aragnimada Qurba-jooga
Hargeya (MK)- Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Somaliland, ayaa bilawday barnaamij lagaga faa’iidaysanaayo xirfada iyo waayo-aragnimada qurba-jooga dalka dib ugu soo noqda ee aqoonta iyo xirfada leh sida lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Hay’adda Shaqaalaha.
Barnaamijkan oo si rasmi ah dalka uga bilaabmay horraantii bishan waxa loo bixiyey “Barnaamijka Gudbinta Xirfadaha,” waxa lagaga faa’iidaysan doona aqoonta iyo xirfadaha aqoonyahanka dibada ku maqna ee dalka booqashada kooban ku jooga.
War-saxaafadeedka arrintan lagu iftiimiyey waxa uu u dhigna sidan; “Sida aynu la wada socono Hay’adda Shaqaalaha Dawladdu waxa ay u taagan tahay qoridda, horumarinta, tayaynta iyo maamulidda shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Somaliland. Iyada oo laga shidaal qaadanayo awoodda dastuur ee hay’adda iyo kor u qaadidda aqoonta iyo tayada shaqaalaha ayaa hay’addu waxa ay muddaba wadday wada tashiyo ku saabsan sidii looga faa’iidaysan lahaa dadka aqoonta iyo xirfadaha leh ee reer Somaliland ee ka imanaya debedaha isla markaana muddo gaaban joogaya dalka. Dadkaasi waxa ay inta badan jecel yihiin in ay dalkooda hooyo uga faa’iideeyaan wakhtiga ay joogaan nasiibdarrose ma helaan tilmaan iyo ciddii isu xilqaami lahayd inay uga faa’iideeyaan dalka, taasina waxay keentaa in ay sidaa ku noqdaan iyada oo aan laga faa’idaysan.
Haddii aad hayso su’aal, fikir, soo jeedin ama la wadaagis ku saabsan barnaamijkan waxa aad la soo xidhiidhi kartaan emailkan: somalilandstp@gmail.com,” ayaa lagu soo gunnaanaday war-saxaafadeedka.